February 9, 2021 - ApannPyay Media
အိမ်ကမထွက်ခင်မှာ အမေဟာ မှာတမ်းခြွေတယ်…(ဖတ်နေရင်းကို မျက်ရည်မထိန်းနိုင်ဘူး…) ” သမီးပြန်အလာ မမျှော်နဲ့တော့အမေ ” အိမ်ကမထွက်ခင်မှာအမေဟာ မှာတမ်းခြွေတယ်….။\_ “ငါ့သမီးဂရုစိုက်နော် မေမေ စိတ်ပူတယ်” တဲ့….. ဆိုင်ကယ်ဦးထုတ်လေးက မေမေ့အကာအကွယ်ပါပေါ့…..။ ဘယ်သူက ထင်ထားမှာလဲ မေမေ….. ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေတဲ့ပြည်သူတွေကို…. ရေပိုက်တွေ မျက်ရည်ယိုဗုံးတွေနဲ့ဖြိုခွဲကြမယ်လို့…. သမီးတို့က စည်းကျော်လာကြတာလည်းမဟုတ်…. အကာအကွယ် ယူလိုက်တာတောင် ….. သမီးကိုထိအောင်ပစ်ကြတယ် မေမေ…. နေတောင ်ညိုရောပေါ့….. သမီးပြန်အလာ မျှော်နေတဲ့မေမေ…. အရိပ်လေးတောင် မတွေ့ရတဲ့အခါ….. ရင်ထဲလှိုက်ဖိုငိုကြွေးနေမလား…. ဒါမှမဟုတ် ….. ပြန်လာသမျှ လမ်းသွားလမ်းလာတွေကို….. ငါ့သမီးလေးရော….. မြသက်သက်ခိုင်လေးရောလို့…… တွေ့သမျှအကုန် လိုက်မေးနေမလား…. မေ့မေ့ကျေးဇူးကြွေး မဆပ်ရသေးပါဘူး…. ဒါပေမယ့် တိုင်းပြည်တာဝန်ကျေပွန်ခဲ့ပါတယ်…. တစ်ချိန်မှာလူတွေက နင့်သမီးရောလို့မေးကြတဲ့အခါ….. “ကျွန်မသမီးလေးဟာ သူရဲကောင်းမလေးပါ”လို့….. မေမေ ဂုဏ်ယူစွာ … Read more
ပိုးသတ်ဆေးမဟုတ်ဘဲ ပိုးသေစေတဲ့ သဘာဝအစားအစာတွေ ပိုးသတ်ဆေးကို ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာ ဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့် ဖြစ်တဲ့ရောဂါတွေကို ကုသပေးတဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ပိုးသတ်ဆေးတွေဟာ ဆေးပြင်းဖြစ်တာကြောင့် ခံစားရတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဟာလည်း အနည်းနဲ့ အများရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပိုးသတ်ဆေးကို ကြာရှည်စွာ စွဲသောက်စရာမလိုဘဲ ကိုယ်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ မကောင်းတဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကို မြန်မြန်သေစေတဲ့ နတ်ဆေးအစားအစာတွေကို ဒီဆောင်းပါးမှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ ပျားရည် ပျားရည်ဟာ အရေပြားအလှအပအတွက်သာမက ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ မကောင်းတဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကို နှိမ်နင်းတဲ့နေရာမှာ အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ ဆေးကောင်းတစ်လက်ပါ။ ဗီတာမင်နဲ့ အာဟာရဓာတ် အစုံအလင်ပါဝင်တဲ့အပြင် ဘက်တီးရီးယားတွေကို သေစေတဲ့ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်ဓာတ်ကြောင့် ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေရဲက ကြီးထွားနှုန်းကို ရပ်တန့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်တဲ့အခါ ပျားရည်ကို ရေနွေး၊ သံပရာရည်နဲ့ ရောပြီးသောက်လို့ ရသလို အနာပေါ် … Read more
ဘဝမှာနောင်တအရဆုံးက ပိန္နဲသီးစားပြီး အစေ့ကို လွှင့်ပစ်ခဲ့မိတာပဲ ပိန္နဲသီး စားပြီးရင် အစေ့တွေကို လွှင့်ပစ်ခဲ့တာ နောင်တရမိတယ် ပိန္နဲစေ့ တွေ လွှင့်မပစ်သင့်တဲ့အကြောင်းရင်း ပိန္နဲသီး စားတဲ့အခါ များသောအား ဖြင့်တော့ အစေ့တွေကို လွှင့်ပစ် လေ့ရှိကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ပိန္နဲစေ့မှာ ပြောမဆုံးနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးတွေ ရှိတယ်ဆိုတာသိထားပြီး အကျိုးရှိရှိသုံးနိုင်အောင်လို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါ တယ်။ အရေးအကြောင်းများ သက်သာစေခြင်း ပိန္နဲစေ့တစ်စေ့ကို နွားနို့အေးအေးထဲမှာ ခဏစိမ်ထားပြီး အနှစ်ဖြစ်တဲ့အထိ ကြိတ်ခြေပါ။ မျက်နှာပေါ်က အရေးအကြောင်းရှိတဲ့ နေရာတွေကို ပိန္နဲစေ့အနှစ်နဲ့ သုတ်လိမ်းပေးရင် လေး၊ ငါးပတ်အတွင်း ထူးခြားလာတာတွေ့ ရမှာပါ။ အသားအရောင်ကောင်းစေခြင်း ပိန္နဲစေ့မှာ အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့အတွက် ဝမ်းချုပ်တာတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အညစ်အကြေးတွေကို စွန့်ထုတ်စေတဲ့အတွက် အသားအရောင် ကိုလည်း ကောင်းစေပါတယ်။ အမာရွတ်ပျောက်စေခြင်း … Read more
စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ ထိထိရောက်ရောက် အာရုံစိုက်ပြီး ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ အောင်လအန်ဆန်း စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ လုပ်ရမယ့်အရာတွေကို ထိထိရောက်ရောက် အာရုံစိုက် ပြီး ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ အောင်လအန်ဆန်း One Championship မှ MMA ကစားသမား မြန်မာနိုင်ငံသား အောင်လအန်ဆန်းက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေကြောင့် ဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပြီး လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောအခြေအနေမှာ ပြည်သူ တွေအနေနဲ့ စည်းစည်းလုံးလုံး နဲ့ လုပ်ရမယ့်အရာတွေကို ထိထိရောက်ရောက် အာရုံစိုက်ပြီး ဆက် လက်လုပ်ဆောင်သွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာက တစ်ဆင့် ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက်နေ့ ညပိုင်းက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ “ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လုံးကကျွန်တော့်အတွက်တော့အခက်ခဲဆုံးကာလဖြစ်ခဲ့တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ၊ မမျှော်လင့်ပဲနဲ့ ပြည်သူက ရွေးချယ်တင်မြောက်ထားတဲ့ ပြည်သူ့ အစိုးရကို စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းယူမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်ကြောင့်နောက်ဆက်တွဲ အကြောင်းအရာတွေလည်း ထပ်ပြီးဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း … Read more
မောင်ကောင်းဆိုတာဘယ်သူလဲဆိုတာ နှောင်းလူငယ်တွေ သိစေဘို့ တစ်ချိန်ကမြန်မာငွေစက္ကူပေါ်က မောင်ကောင်းဆိုတာ ၁၉၅၅ ခုနှစ်ဝန်းကျင်က မြန်မာ့ငွေသည် အလွန်တန်ဖိုးရှိခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က အမေရိကန် တစ်ဒေါ်လာသည် မြန်မာကျပ်ငွေ ၆ကျပ်နှင့် ညီမျှသည်။မည်သည့်နိုင်ငံကိုသွားသွား အခြားငွေလဲစရာမလို မြန်မာကျပ်ငွေကို ယူသွားပြီး သုံးစွဲနိုင်ပြီး ခိုင်မာတဲ့ငွေ (ငွေမာ) (Hard Currency) အဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့ဖူးသည်။ ထိုခေတ် ထိုအခါက ငွေစက္ကူများပေါ်တွင် မြန်မာငွေ ကြေးဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည့် မောင်ကောင်း စံလင်းဟူသောလက်မှတ်များကို တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ မောင်ကောင်းဆိုသည်မှာ ပညာမင်းကြီး၊ ပထမဆုံးမြန်မာ့သမိုင်းကော်မရှင် ဥက္ကဌအဖြစ် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် စည်သူ ဦးကောင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဦးကောင်းအား ၁၉၀၄-ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၃၀)ရက်နေ့၌ ယစ်မျိုးမင်းကြီး ဦးဘသော်နှင့် ဒေါ်ကြင်မြိုင်တို့က မြင်းခြံမြို့၌ ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ အသက် ငါးနှစ်အရွယ်တွင် မြင်းခြံမြို့ ဘက်ပလစ်ကျောင်း၌ စတင်ပညာသင်ကြားခဲ့ပါသည်။ … Read more
“ပုဒ်မ ၁၄၄ အကြောင်း သိကောင်းစရာ” “ပုဒ်မ ၁၄၄ ဆိုတာ” ပုဒ်မ-၁၄၄-ရဲ့ အမိန့်အာဏာမှာ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူပိုင်ခွင့်တွေ ရှိနေတယ် ။ လူ( ၅ ) ဦး ထက် မစုရဆိုတဲ့ အမိန့်ကို သာမန်ပြည်သူတွေ သိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ဒီ့ထက်ပို လို့မသိနိုင်ကြပါဘူး။ တစ်ကယ်လို့ လူစုဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတဲ့ ဥပဒေပြဋ္ဌန်းချက်တွေ ရှိနေတယ် ။ ပဋိပက္ခ အဓိက ရုဏ်းနှိမ်နှင်းရေးလက်စွဲ ဥပဒေစာအုပ်ကို ရဲ အရာရှိတွေသာ သီးသန့်လျှို့ဝှက်သင်ယူဖတ်ထားရတယ် ။ ပုဒ်မ-၁၄၄-အမိန့်ကို ထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက် လူ( ၅ )ဦးထက် ပိုမိုပြီး စုလာဖြစ်ပြီဆိုရင် ဒါဟာနိုင်ငံတော်က ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေအမိန့်ကိုချိုးဖေါက်လာတာဖြစ်တယ် ။ ဒါကြောင့် ပုဒ်မ-၁၄၄-ရဲ့အမိန့်အာဏာဒီဂရီကို ဘယ်လိုဖေါ်ပြထားတယ်- ဘယ်လိုလုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိတယ် ဆိုတာကို ရှင်းပြပေးလိုက်ပါတယ် … Read more
ဦးဖိုးအေးတို့ မိသားစု သချႋုင်းထဲ မှာ ပေါက်တဲ့ မျှစ်ကို ချိုးယူပြီး စားလိုက်မိကြသောအခါ.
ဦးဖိုးအေးတို့ မိသားစု သချႋုင်းထဲ မှာ ပေါက်တဲ့ မျှစ်ကို ချိုးယူပြီး စားလိုက်မိကြသောအခါ. သင်္ချိုင်း ဆိုသည်မှာ* လူတစ်ယောက်က မေးတယ်… “ကိုဖိုးအေး ခင်ဗျား သင်္ချိုင်းထဲက မျှစ်တွေ ယူစားနေတာ မရွှံဘူးလား…? ဖြေ။ ။”ဘာရွှံမလဲကွ လူသေကောင်က ထွက်တဲ့မျှစ်မှ မဟုတ်တာ မြေကြီးထဲက ထွက်တဲ့မျှစ်ပဲ ဘာရွှံစရာရှိလဲ။ သင်္ချိုင်းဆိုတာလဲ မြေကြီးပါပဲကွာ လူတွေသမုတ်ထားလို့သာ သင်္ချိုင်းဖြစ်နေတာပါ ငါဆို ဒီသင်္ချိုင်းက ထွက်တဲ့မျှစ်တွေ စားလာတာ ကြာပါပြီ။ ကြည့်စမ်း ငါ့သားသမီးတွေ ဘယ်လောက်ချောလဲ။ ကျန်းမာရေး ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ။ဖျားနာနေတာ မင်းတို့မြင်ဘူးလာ။ဉာဏ်ရည်ဆိုတာလည်း ငါ့သားသမီးတွေ ကျူရှင်တောင်မယူနိုင်ဘူး။ ရွာကနေ ကျပ်ပြင်ကျောင်းသွားတတ်နေရတာ။ မင်းတို့စဉ်းစားကြည့် မြတ်စွာဘုရားတောင်မှ သုသာန်တစ်စ သင်္ချိုင်းဝက လူသေလွှမ်းတဲ့အဝတ်တွေ ကောက်ယူတော်မူပြီး ပံ့သုကူသင်္ကန်းချုပ်ပြီး သုံးဆောင်တော်မူသေးတာ မင်းတို့ငါတို့လို ဘာမှမဟုတ်တဲ့အကောင်တွေက … Read more
ခြေထောက်၊ဒူးနှင့် ပေါင်များ ထုံကျဉ်လာရင် ဒီဆေးနည်းလေးနဲ့ဆို အဆင်ပြေသွားမှာပါ
ခြေထောက်၊ဒူးနှင့် ပေါင်များ ထုံကျဉ်လာရင် ဒီဆေးနည်းလေးနဲ့ဆို အဆင်ပြေသွားမှာပါ မနက်အိပ်ရာထချိန်များမှာ လက်ချောင်းလေးတွေတင်းနေပြီး၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာတောင် မပြေချင်တဲ့ အနေအထားမျိုးဖြစ်နေကြသူများကို ထုံကျင်နာများပျောက်ကင်းစေပြီးရောဂါကင်းဝေးစေချင်လို့ ဒီဆေးနည်းလေးကို မျှဝေတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီဆေးနည်းလေးကတော့ တစ်နေကုန် ထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်နေရသူများဖြစ်ကြတဲ့ ရုံးသမားများ၊စက်ချုပ်သမားများ၊ စားဝတ်နေရေးအတွက် မိုးလင်းမှမိုးချုပ်တစ်နေကုန် အလုပ်ခွင်ထဲမှာအလုပ် များနေသူများအတွက် ရောဂါကင်းဝေးစေရေးနည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်တွေကြာလာတဲ့အခါ ခြေထောက်၊ဒူးနှင့် ပေါင်များဟာ ထုံကျဉ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါ ဆေးလိမ်း၍ မသက်သာဘဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နွေရာသီမှာ ခံနိုင်ပေမယ့် မိုးနဲ့ဆောင်းမှာတော့ ထုံကျဉ်တဲ့ဝေဒနာများဟာ ပို၍ ဆိုးရွားလာကာ လေဖြတ်ချင်တဲ့အထိဖြစ်မှုများကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်။ တစ်ခြားနည်းတွေလည်းရှိပေမယ့် ဒီဆေးနည်းလေးကတော့ ရှာဖွေအသုံးပြုရန် ပစ္စည်းများဟာ လွယ်ကူလွန်းပြီး ပြုလုပ်ပုံကလည်း မခက်ခဲတာမို့ ကိုယ်တိုင်ရောဂါ မဖြစ်လို့ အသုံးမပြုခဲ့ရင်တောင် တစ်ခြားသူများကို နည်းလမ်းလေးညွှန်ကြားပေးစေလိုတဲ့ဆန္ဒနှင့်ထပ်ဆင့် တင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကတော့ ချင်းတက်၊ စပါးလင်၊ သံပုရာသီးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ … Read more
၀န်ထမ်းများ နိုင်ငံရေးတွင် မပါဝင်ရဟု ဆို
၀န်ထမ်းများ နိုင်ငံရေးတွင် မပါဝင်ရဟု ဆို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ နိုင်ငံတော်ကပေးတဲ့ လစာနဲ့ ခံစားခွင့် ရယူထားပြီး နိိုင်ငံရေး ဆောင်ရွက်လို့ မရဘူးလို့ အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ အာဏာသိမ်းအစိုးရရဲ့ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီနဲ့ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ သို့မဟုတ် ဒေသ စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ ဒီကနေ့ နေပြည်တော်မှာ ညှိနှိုင်းအစည်းအစည်းအဝေးကျင်းပရာမှာ ပြောဆိုခဲ့တာ ပါ။ “နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ပါတီနိုင်ငံရေးကင်းရှင်းရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်မှပေးသည့် လစာနှင့်ခံစားခွင့်များကို ရယူထားပြီး နိုင်ငံရေးဆောင်ရွက်၍ မရပါကြောင်း၊ မိမိတို့ နိုင်ငံထက် ဒီမိုကရေစီ ပိုမိုရင့်ကျက်သည့် နိုင်ငံများတွင်လည်း ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုအရ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများသည် နိုင်ငံရေးတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသည်ကို တွေ့ရှိရကြောင်း၊ မိမိတို့ နှစ်သက် သည့် ပါတီများကို လွတ်လပ်စွာမဲပေးနိုင်သော်လည်း လုပ်ငန်းတာဝန်ထမ်းဆောင် … Read more
တစ်ဖက်ကန်းနေကြသူများ? မျက်လုံးရှိရက်သူများအပြစ်ကိုပဲမြင်တတ်တာအ-ကုသိုလ် မျက်လုံးပါ။နားရှိရက်သူများ ဒုက္ခကိုသာကြားချင်တာအ-ကုသိုလ် နားပါ။ ပါးစပ်ရှိရက်တစ်ဖက်သား မကောင်းကြောင်းကိုယ့်ကောင်းကြောင်းပဲပြောတတ်တာအ-ကုသိုလ် ပါးစပ်ပါ။လူအချို့ဟာကိုယ့်ဖက်ကို ကြည့်ရင်မျက်စိတစ်ဖက် ကန်းနေကြပါတယ်။ သူတစ်ပါးတိုးတက်ကြီးပွားကြောင်းကြားရရင်နားတစ်ဖက်ကန်းနေကြပါတယ်။သူတစ်ပါးကောင်းကြောင်းပြောဖို့ကြုံလာရင်နှုတ်ဆိတ်ပြီးအ-နေတတ်ကြပါတယ်။လောကကြီးမှာ လူပီသဖို့ရာကိုယ်ချင်းစာတရားထားတတ်မှလူဟာ လူနဲ့တူမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ဖက်ဇောင်းနင်းပြီးတစ်ဖက်ပိတ်နေတတ်တဲ့အထဲမှာ ကိုယ်မပါစေနဲ့။ CreditOriginalUploader တစ္ဖက္ကန္းေနၾကသူမ်ား? မ်က္လုံးရွိရက္သူမ်ားအျပစ္ကိုပဲျမင္တတ္တာအ-ကုသိုလ္ မ်က္လုံးပါ။နားရွိရက္သူမ်ား ဒုကၡကိုသာၾကားခ်င္တာအ-ကုသိုလ္ နားပါ။ ပါးစပ္ရွိရက္တစ္ဖက္သား မေကာင္းေၾကာင္းကိုယ့္ေကာင္းေၾကာင္းပဲေျပာတတ္တာအ-ကုသိုလ္ ပါးစပ္ပါ။လူအခ်ိဳ႕ဟာကိုယ့္ဖက္ကို ၾကည့္ရင္မ်က္စိတစ္ဖက္ ကန္းေနၾကပါတယ္။ သူတစ္ပါးတိုးတက္ႀကီးပြားေၾကာင္းၾကားရရင္နားတစ္ဖက္ကန္းေနၾကပါတယ္။သူတစ္ပါးေကာင္းေၾကာင္းေျပာဖို႔ႀကဳံလာရင္ႏႈတ္ဆိတ္ၿပီးအ-ေနတတ္ၾကပါတယ္။ေလာကႀကီးမွာ လူပီသဖို႔ရာကိုယ္ခ်င္းစာတရားထားတတ္မွလူဟာ လူနဲ႔တူမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္တစ္ဖက္ေဇာင္းနင္းၿပီးတစ္ဖက္ပိတ္ေနတတ္တဲ့အထဲမွာ ကိုယ္မပါေစနဲ႔။ CreditOriginalUploader